Chengetedza Apple TV ne iPhone yako neApple Tenda ku Remote | IPhone nhau
Chengetedza Apple TV ne iPhone yako neApple Tenda ku Remote
Iyo nyowani Apple TV inounza kure kure nemabasa epamberi senge mukana wekushandisa Siri, kana trackpad iyo inobvumidza iwe kuti uitwe nemasaini kudzora kutamba kwemavhidhiyo. Asi haisi iyo chete nzira yekudzora yedu multimedia chishandiso, kubvira Apple yakagara ichipa isu Remote application, inowanikwa muApp Store uye inoenderana ne iPhone ne iPad, uye pre-yakaiswa paApple Watch, uye inogona kuve yakanakisa imwe nzira kune Siri Remote kuitira nyore kushandisa wachi yedu kana iyo iPhone iyo yatinogara tiine padhuze kutonga iyo Apple TV, tisingatauri iko nyore kwekushandisa iyo keyboard ye iPhone yedu kuisa data.
Kunyangwe zvishandiso zvichigona kuwedzerwa nemaoko Chinhu chakanyanya kugadzikana pasina mubvunzo kumisikidza sarudzo «Govera kumba» pane edu ese zvigadzirwa. Nekuda kwesarudzo iyi hatizokwanisa chete kuona raibhurari yedu yese yeTunes pane chero zvigadzirwa zvedu nekungovabatanidza netiweki imwechete, asi Remote ichaonawo zvese zvishandiso zviri zveinetiweki uye haufanire gadzirisa chero chinhu, ivo vanobva vango wedzerwa kuapp.
PaApple TV enda kuZvirongwa> Maakaundi> Kugovana Kumba uye gonesa sarudzo
MuTunes enda kuFaira> Kugovana Kumba uye gonesa sarudzo
Mune Remote application ye iPhone yako kana iPad, enda kuZvirongwa uye shandisa iyo Kugovana pamba sarudzo
Izvo zvakakosha kuti urangarire kuti pane izvi zvese zvishandiso paunoshandisa iyo Yekugovana Kumba sarudzo unofanira kushandisa nguva imwe chete iTunes nhoroondo kuitira kuti vaonane.
Imwe yambogadziriswa, iyo Apple TV ichaonekwa pane huru skrini yeiyo iPhone kana iPad application. Unogona kubatanidza akawanda Apple TVs kana uchida, uye kubatanidza akawanda Remote maapplication kune imwechete Apple TV. Iwo manejimendi akafanana chaizvo neaya anopiwa neSiri Remote: trackpad iyo inotora yakanyanya skrini, bhatani reMenu kudzokera kumashure, uye bhatani reKutamba / Kumbomira. Zvakare, pese patinodzvanya pabhokisi patinofanira kutaipa chimwe chinhu, keyboard ichaonekwa pane iyo iPhone skrini iyo kunyora kunokurumidza zvisingaite uye kugadzikana kupfuura neyakaipisisa Apple TV kiibhodhi.
Iwo iwo maitirwo ane Remote application yeApple Watch. ¿Panogona kunge paine chero chinhu chakasununguka pane kudzora kutamba kweiyo bhaisikopo iwe usinga svike kune yekure kure? tendeuka ruoko rwako uye ipapo iwe une macontrol aunoda.
Apple yakasimbisa izvozvo iyo Remote app ichave neinouya yekuvandudza iyo inowedzera matsva maficha kuti ienzaniswe neSiri RemoteSezvo, semuenzaniso, hapana ikozvino nzira yekushandisa Siri neapp. Asi ikozvino, kunyangwe iine hwaro, ichiri sarudzo yakasununguka yekudzora Apple TV.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple tv » Chengetedza Apple TV ne iPhone yako neApple Tenda ku Remote
Apple kuwedzera nyowani Beats Radio zviteshi muna 2016
Hyundai kuunza CarPlay kuSonata gore rinouya